Imibono emihle yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho | Bezzia
Imibono emihle yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho
Uma ufuna ukunikeza ikamelo lakho ukuthinta okuhlukile Kepha awazi ukuthi ungakwenza kanjani ngendlela elula ukuze ikunikeze imiphumela emihle kakhulu, ungayenza ngokuguqula i-headboard yombhede.
Kule ndatshana sikutshela ungenza kanjani ikamelo lakho lokulala libukeke lihlukile ukuvuselela nje i-headboard yombhede wakho.
Ikamelo lokulala lingenye yezindawo ezisendlini lapho lingavumi khona ifenisha eningi. Into emaphakathi ngumbhede, kulandelwa amakhabethe, abagqoki namatafula asembhedeni. Ngokuya ngohlobo lokulala, uma lusentsha kakhulu luzoba nedeski, ngakolunye uhlangothi, amakamelo okulala amakhulu awavamisile ukuba nezinto eziningi.
Ngalesi sizathu, sizokwazi imibono engcono kakhulu yokushintsha i-headboard yombhede wakho futhi sikunikeze ukuthinta okwehlukile. Ngakho-ke, ake sazi eminye imibono yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho bese uvula ikamelo lakho libe yindawo oyithandayo.
Ngokuya ngobukhulu bekamelo lakho, ungangeza isihlalo noma isifuba samadilaki ukugcwalisa noma iyiphi indawo engenalutho, noma kunjalo, akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Kungakho i-headboard yombhede ingathatha isigaba sendawo futhi ikunikeze ukuthintwa komuntu siqu.
1 Yenza ikamelo lakho lokulala libe yindawo emnandi kunazo zonke
2 Khetha i-headboard ephelele yombhede wakho
2.1 Izinto zokwakha
2.2 Uhlobo lwehedibhodi
2.4 Ngamatafula ombhede owakhelwe ngaphakathi
3 Imibono yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho
3.1 Ama-headboards anama-photo ozimele
3.2 Amabhodi wamakhanda asebenzayo
3.3 Amabhodi anamaphephadonga
3.4 Ishalofu elihlanganisiwe noma ishalofu
Yenza ikamelo lakho lokulala libe yindawo emnandi kunazo zonke
Kubalulekile ukulala endaweni emnandi, ngezizathu eziningi, kepha ngaphezu kwakho konke ukujabulela izinzuzo zokuphumula okuhle. I-headboard ingahamba ibanga elide ekutholeni lelo gumbi lihle futhi limnandi.
Uma sinegumbi elifudumele nelimnandi sizofeza uchungechunge lwezinzuzo: cabanga kahle, usabele ngokushesha, uthuthukise inkumbulo nokuhlushwa. Ukungalali kahle akuphazamisi ukusebenza komzimba wethu jikelele, kodwa futhi kuphazamisa izinga lempilo, ubudlelwano, umsebenzi nobudlelwano bomndeni.
Ukuze igumbi lakho libe nomoya omuhle futhi lijabulise ngangokunokwenzeka, qaphela lawa macebiso:
Khetha izithunzi ezikhuthaza ukuthula. Phakathi kwazo kukhona amathoni okukhanya kwesihlabathi nemibala yomhlaba. Izinkuni zisinikeza ikhwalithi eningi futhi ziqhathanisa kahle ne-beige, blues nemifino.
Khetha ukukhanyisa okunamathoni abomvu futhi okulingisa ukushona kwelanga. Ngalokhu kufanele usebenzise amalambu angaqondile ku-headboard.
Sebenzisa amatagi enziwe ngezinto ezinokuthungwa okumnandi njengosilika noma uboya.
Naka kakhulu embhedeni. Kulokhu, ku-headboard, yize kufanele unake nokugobeka komhlane wakho futhi izindwangu zombhede zilula nokotini.
Khetha i-headboard ephelele yombhede wakho
Kulula kakhulu ukulahleka endaweni yonke yamabhodi wamakhanda. Izinhlobonhlobo ziningi futhi iningi likhanga kangangokuba sizofuna ukuzizama zonke. Kepha njengoba sishilo, kuzofanele njalo sibheke isitayela sendlu yethu ukuze ingashayisani.
Ngakolunye uhlangothi, mhlawumbe sinikeza ukuqondana okwengeziwe kwisitayela nobuhle kunokusebenza kwebhodi eyinhloko. Zombili zibaluleke ngendlela efanayo.
Uma ufuna ikamelo lakho lokulala libukeke kangcono, futhi lifakwe kahle ngomsindo, linemibala emihle odongeni nakho konke ukunethezeka, gcina lezi zici engqondweni.
Kubalulekile ukucabangela ukuthi yiziphi izinto ezisetshenzisiwe ekamelweni lokulala. Ngokuya ngokuthanda kwakho kanye nesabelomali kuzoba ngohlobo oluthile noma olunye. Lezi zokhuni yizo ezisinika imizwa yokufudumala kakhulu, esikhundleni salokho, ungasebenzisa lezo zensimbi.
Kuyibhodi eyinhloko eyingxenye yesakhiwo sombhede noma oyithenga ngokwehlukana. I-headboard nombhede kungenzeka kungafani noma kungaphelezelaniNoma kunjalo, kungakha umphumela omuhle kakhulu wokubuka.
Ngakho-ke ungakhathazeki uma i-headboard yakho ingafani nombhede, lokho kungaba ukuthinta okudingeka igumbi lakho lokulala.
Ungakhetha izintambo zemvelo ezifana nekotini noma ilineni, ngoba umphumela wazo usha kakhulu. Njengamathoni akhanyayo ukuze uhambisane kakhulu nalolu hlobo lwezindwangu.
Uma ukhetha imicu yokwenziwa, lokhu kuzoba lula ukuyihlanza futhi kuvikeleke kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, labo abanokubukeka kwe-velvet bazoyinika ukubukeka okudala futhi okunethezeka. Ungangeza futhi izinkinobho, njengesitayela esinezinkinobho noma izikopelo ezinhlangothini.
Ngamatafula ombhede owakhelwe ngaphakathi
Ungakhetha i-headboard esivele inamalambu etafula eliseceleni kombhede, lokhu kuzonikeza ukwakheka nokusebenza. Yini enye, uzovimbela amalambu ekuthatheni isikhala ematafuleni asembhedeni.
Imibono yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho
Okulandelayo, sikutshela imibono emihle kakhulu yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho. Ngale ndlela uzothola isitayela esihlukile ekamelweni lakho lokulala ngendlela elula.
Ama-headboards anama-photo ozimele
Kungumqondo wesimanje kakhulu osetshenziswa kakhulu. Izithombe, izithombe noma izithombe zibekwa endaweni yokuthi i-headboard izongena kuphi, inamathiselwe odongeni. Kuzogxilwa kuzithombe.
Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha izithombe kahle ukuze konke kuhambisane.
Amabhodi wamakhanda asebenzayo
Zihle kakhulu ekwandiseni izikhala ngangokunokwenzeka. Lawa ma-headboard anamashalofu akhelwe ngaphakathi nezindawo zokugcina, okwenza kube kuhle kulabo abanezinto eziningi emakhaya abo. Ngakho-ke, ngokungeziwe, bazokwazi ukuba nakho konke esikudingayo ngaleso sikhathi sokuphumula.
Kulokhu, ungabeka iphepha lodonga kuphela ingxenye yodonga engahambisana nebhodi eyinhloko noma lonke udonga oluhlukanisa isigaba se-headboard ngesici esihlukile. Kulokhu, ungakhetha iphepha elifanelana kahle nesitayela sakho futhi inhloso ukuthi ungayiguqula kaningi ngangokunokwenzeka uma nje uqaphele lapho uyisusa.
Ishalofu elihlanganisiwe noma ishalofu
Ungakwazi futhi ukufaka esikhundleni se-headboard yakho eshalofini noma eshalofini noma eziningana ukuze usebenze njengendawo yokugcina. Ungenza ishalofu lihlanganiswe nodonga ukubeka ozimele bezithombe, izinto zokuklama noma izikhumbuzo. Ngaphezu kwalokho, ungabeka isibani lapho ukuze ungasebenzisi isikhala etafuleni lakho eliseceleni kombhede.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Imibono emihle yokuhlobisa i-headboard yombhede wakho